Workshop on Gender issues for women committee and active members of IWFM with the help of IndustriALL. – CTUM
Workshop on Gender issues for women committee and active members of IWFM with the help of IndustriALL.
အလုပ်သမားတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ (လက်ကမ်းစာစောင်)
Dismissed three Chen Myanmar union leaders were reinstated
Published by ctum at June 13, 2019
Workshop on Gender issues for women committee and active members of IWFM with the help of IndustriALL. (24 25 May 2019) in Yangon.
မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် IWFM ၏ ကျား။ မ အခြေပြု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးပွဲကို ဥက္ကဌ ဒေါ်ဆွေဆွေခိုင်မှ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အခြားသော အမျိုးသမီးကော်မတီတာဝန်ရှိသာများဖြစ်သည့် မဇင်မာမျိုး၊ မစိမ်းမို့ မို့လှိုင် ၊ကိုစိုးသက်ပိုင် တို့က ပါဝင်ကူညီဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲ ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊လှိုင်သာယာမြိုနယ် ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ လမ်းမကြီးအမှတ် A/174 အမျိုးသမီးစင်တာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီး ကော်မတီများ ၏ အကြောင်းပုံဖော်ဆွေးနွေးချက် နှင့် Gender 101 အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပြင်၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်၎င်းတို့ခေါင်းဆောင်မှုများတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ပူးပေါင်းမှု ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်အရာများနှင့် အောင်မြင်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုလည်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို အလုပ်သမားသမဂ္ဂများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
English below. Thirty worker representatives and union leaders participated in the event. The president of CTUM Women committe Daw Shwe Shwe Khaing madeawelcoming speech and also participated in the afternoon session. The other women and young leaders eagerly supported the workshop were Zin Mar Myo, Sein Moth Moth Hlaing and Soe Thet Paing, who all are the responsible persons of IWFM women committee. It convened at the Women Center CTUM HlaingThar Yar Township, Yangon.
Sister Shwe Shwe the vice president of the Women committee of Conferdation Trade Of Union Myanmar (CTUM) and the IWFM of its women committee, kindly joined both workshops and generously shared her experience and skills. Her discussions made in the workshop were the profile of women and women workers in Myanmar, and the explanation of gender 101. Her contributions to the event included the discussions on the obstacles that block the participation of women in trade unions as well as the factors promoting it.